स्लटोक्याश वर्ल्डवाइड कुनै निक्षेप बोनस कोड २०२०
अक्सर को एक भाग को रूप मा गलत संयुक्त राज्य, आइल अफ म्यान वास्तवमा आफ्नै सरकारको साथ पृथक क्षेत्राधिकार हो। वास्तवमा यो स्वतन्त्रताले सानो टापुलाई वित्तीय केन्द्रमा पुर्‍यायो जुन आजको रूपमा चिनिन्छ। UK कम्पनीहरू त्यहाँ आफ्नो सम्पत्ति दर्ता गर्न ज्ञात छन् तर तिनीहरू अनुकूल माxक्स कानूनबाट फाइदा लिन खोजिरहेका केवल अपरेटरहरू होइनन्। आज, टापु पनि एक अनलाइन शर्त र जुवा हब मानिन्छ। यसको सानो आकारको बाबजुद, यसले वर्षौंको अवधिमा अनलाइन अनलाइन जुवा कम्पनीहरूको आँखा आकर्षित गर्यो। यदि तपाइँले यस गेमि license लाइसेन्सलाई कत्तिको लालच गर्छ भनेर खोज्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अनलाईन क्यासिनो आइल अफ म्यान विकल्पहरूको सूची छ जुन तपाइँलाई हटाउन सकिन्छ।
शीर्ष १० आइल अफ म्यान अनलाईन क्यासिनो साइटहरू एक नयाँ बोनसको साथ!
२० नि: शुल्क स्पिन + २००% up to००० सम्म
€ 600 बोनस सम्म
तपाईंको पहिलो जम्मामा %००० सम्म up००० सम्म
एक ठूलो बोनसको साथ शीर्ष १० आइल अफ म्यान अनलाइन क्यासिनो साइटहरू!
आइल अफ म्यान शर्त नियमहरू र इजाजत पत्र आवश्यकताहरू
आइल अफ म्यान इजाजतपत्रको लागि विचार गर्न एक अनलाइन प्रदायकले धेरै आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्दछ। सबैभन्दा पहिला, बुकीको टापुमा पर्याप्त कार्यालय हुनु पर्छ। यसले सबै इजाजतपत्र आवश्यकताहरू पनि पूरा गर्न आवश्यक छ र यो देखाउँदछ कि यसको आपराधिकरणसँग कुनै सम्बन्ध छैन र स्पष्ट स्वामित्वको मोडेल निष्ठामा आधारित छ र मनी लाउन्डरिंग विरोधी नीतिहरूको पालना गर्दछ। अन्तमा, खेलपुस्तकले यो बेटि bet्ग सेवाहरू चलाउनमा सक्षम छ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्दछ र विजिट पन्टर्सलाई भुक्तान गर्न पर्याप्त वित्तीय छ। इजाजत पत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अपेक्षाकृत छिटो छ, किनकि आयोगले साधारणतया २ महिना वा कममा कुनै निर्णयमा पुग्नेछ।
जब एक बुकीले आइल अफ म्यान द्वारा इजाजत पत्र प्राप्त गर्न को लागी, तिनीहरू विभिन्न बिभिन्न सुविधाहरूमा गणना गर्न सक्छन्। यसको स्वतन्त्र स्थितिको कारण, आइल अफ म्यानले बुकमेकरहरूलाई एउटा अद्वितीय व्यापार वातावरण प्रदान गर्दछ। यो, विशेष रूपमा, विशेष प्रोत्साहन र भ्याट छुटमा लागू हुन्छ।
आइल अफ म्यान उल्लेखनीय कानून र कानूनहरू
आइल अफ म्यान जुवा पर्यवेक्षण आयोगले वर्षौंको अवधिमा विभिन्न प्रकारका कानूनहरू बनाएको छ। आयोगले कार्यान्वयन गरेको सबैभन्दा उल्लेखनीय नियमन २००१ को अनलाईन जुवा नियमन ऐन हो। यसले अनलाइन शर्त र जुवाको आधारभूत नियमहरू प्रदान गर्‍यो र अन्य नियमहरूको लागि मार्ग प्रशस्त गर्यो। अन्य ठोस नियमहरूले २०० 2001 को अनलाइन जुवा नियमहरू समावेश गर्दछ, जसले मार्केटिंग र विज्ञापनको लागि आवश्यकताहरू परिभाषित गर्दछ, र जुवा पर्यवेक्षण ऐन २०१०, जसले पछि आइल अफ म्यान जुवा पर्यवेक्षण आयोगको स्थितिलाई परिभाषित गर्दछ।
आइल अफ म्यान इजाजतपत्र परीक्षण र Bettor संरक्षण
यसका सबै इजाजतपत्र प्राप्त बुकमार्करहरू टी एन्ड सीको अनुसार कार्य गरिरहेको छ भन्ने सुनिश्चित गर्न, आइल अफ म्यान जुवा सुपरिभिजन्स कमिशनले धेरै स्वतन्त्र लेखा परीक्षकहरूलाई सहयोग गर्दछ। तिनीहरूको गतिविधिहरूले सुनिश्चित गर्दछ कि सबै शर्त संयन्त्र ठाउँमा छन् राम्रो अनुकूल र निष्पक्ष छन्। आयोगले अनियमित व्यापार रेकर्ड निरीक्षणहरू लागू गर्दछ। यदि लेखा परीक्षकहरूले धोखाधडी, मनी लान्ड्रिंग, अपर्याप्त कोष वा लाइसेन्स सर्तका कुनै अन्य उल्ल .्घनको कुनै प्रमाण फेला पारे, तिनीहरूले शर्त साइटबाट इजाजतपत्र रद्द गर्नेछन्।
कडा नियमहरू राखिएको ठाउँमा आयोगले बेटिting्ग अपरेटरहरूलाई उनीहरूको कार्यको लागि जिम्मेवार राख्छ। यो सर्तहरूको एक धेरै कडा सेट छ जब यो वित्तीय नीति को कुरा आउँछ तिनीहरूको लाइसेन्स बुकमार्करहरूले पालना गर्नै पर्दछ। आइल अफ म्यान जुवाerv पर्यवेक्षण आयोगले सबै वित्तीय खाताहरूलाई नजिकबाट अनुगमन गर्दछ कि यो सुनिश्चित गर्न कि परिचालन कोष र बेटर कोषहरू कहिल्यै मिसिदैनन्। यो एक betker अन्तर्गत मा मामला मा आर्थिक सुरक्षा संग betters प्रदान गर्दछ। अपरेटरहरू उच्च उत्तरदायित्वमा समाहित हुन्छन्, विशेष गरी जब यो तिनीहरूको गोपनीयता नीतिहरूमा आउँदछ। इजाजत पत्रहरू प्रत्येक पाँच बर्षमा नवीकरण गरिन्छ। बुकमेकरहरूले देखाउनु पर्छ कि उनीहरूले बेटर अनुकूल मैत्री वातावरण प्रदान गर्छन्, र उनीहरूको प्रयोगकर्ताहरूको निजी जानकारी र वित्तीय जोगाउन पर्याप्त सुरक्षा विधिहरू छन्। बुकिहरू जुन त्यसो गर्न असफल हुन्छन्, उनीहरूको आइल अफ म्यान इजाजतपत्र खोसियो।
कसरी थाहा पाउने कि यदि खेलकुद पुस्तक आइल अफ म्यान द्वारा नियन्त्रित छ?
इइल अफ म्यान जुवा पर्यवेक्षण आयोग पर्याप्त सम्मानित छ कि उनीहरूले प्रायः जसो सटोरिसहरूले आफ्नो इजाजतपत्र बनाउने प्रयास गर्दछन्। केही फरक पर्दैन यदि एक अनलाइन खेलपुस्तकले दावी गर्दछ कि योसँग मान्य इजाजतपत्र छ वा छैन, तपाईंले सधैं उनीहरूसँग साइन अप गर्नु अघि पृष्ठभूमि जाँच गर्नुपर्नेछ। तपाईं उनीहरूको गृह पृष्ठको फुटर जाँच गरेर र आइल अफ म्यान जुवा पर्यवेक्षण आयोग लोगो खोजेर यो गर्न सक्नुहुनेछ। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं आइल अफ म्यान सरकारको साइटमा जान सक्नुहुनेछ र बुकी प्राधिकरण द्वारा इजाजतपत्र पाएको छ कि छैन भनेर जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। आइल अफ म्यान आधिकारिक साइटले प्रतिबन्धित र कालोसूची गरिएको क्यासिनोहरूको लामो सूची समावेश गर्दछ जुन उनीहरू द्वारा असुरक्षित मानिन्छ।
उजुरी प्रक्रिया - कसरी गुनासो तय गर्ने?
आयोगले तपाईंलाई पहिले इजाजतपत्र धारकलाई उनीहरूको मुद्दाको बारेमा पुग्न सल्लाह दिन्छ। अधिकांश मुद्दाहरू अपरेटरसँग नै समाधान गर्न सकिन्छ। यदि, तथापि, तपाइँ कसरी तपाइँको गुनासो सुल्झाइएकोमा असन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने, तपाइँ आइल अफ मैन जुवा पर्यवेक्षण आयोगलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ उनीहरूको वेबसाइटमा एक फारम सीधा पूरा गरेर। यदि तपाईं र अपरेटरले फरक फरक मत राख्यो भने आयोगले मध्यस्थको रूपमा कदम चाल्न सक्छ। यदि तपाइँसँग एक मुद्दा छ कि आयोगले मध्यस्थता आवश्यक छ, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ फारम भर गर्नुहुन्छ। यो अंग्रेजीमा हुनुपर्दछ र तपाईंको पूरा नाम, सम्पर्क विवरणहरू, खाता प्रयोगकर्ता नाम, बुकीको नाम, तपाईंको गुनासोको पूरा विवरण र सबै सम्बन्धित कागजातहरू आफैं र बुकमेकर बीच पत्राचार समावेश गर्नुपर्दछ। यदि तपाईंको व्यक्तिगत केसको छानबिनको आवश्यकता छ भने, आयोगले तपाईंको उजूरी स्वीकार गर्नेछ र तपाईंलाई प्रक्रियाको नतीजाको बारेमा सूचित गराउँदछ।
शीर्ष १० आइल अफ म्यान अनलाईन क्यासिनो साइटहरू अपडेट गरिएको: जुन 1, 2020 लेखक: Damon
1 शीर्ष १० आइल अफ म्यान अनलाईन क्यासिनो साइटहरू एक नयाँ बोनसको साथ!
1.1 एक ठूलो बोनसको साथ शीर्ष १० आइल अफ म्यान अनलाइन क्यासिनो साइटहरू!
2 आइल अफ म्यान उल्लेखनीय कानून र कानूनहरू
3 आइल अफ म्यान इजाजतपत्र परीक्षण र Bettor संरक्षण
बुकमेकर क्यासिनो समीक्षा
शीर्ष १० ईस्ले को ...